Budada Noopept Raw (157115-85-0) Soosaarayaasha - Kiimikada 'Phcoker'
Budada Noopept waa maaddada loo yaqaan 'Nootropic molecule' oo la mid ah Piracetam. Budada Noopept waxay leedahay saameyn la mid ah budada piracetam, taas oo keeneysa a ..
Capacity: 1245kg / bishii
Budada Raw Noopept (157115-85-0) video
Budada Raw Noopept (157115-85-0) Sharaxaad
Kiimikada Raw Noopept waa falanqeyn garasho oo si fiican u shaqeynaya Piracetam marka laga hadlayo dareenka dareenka ka dib dhaawacyada maskaxda ama dhaawacyada maskaxda.
Kobcinta garaadka ee korriinka Raw Noopept (N-phenylacetyl-L-prolylglycine ethyl ester) ayaa ku wareegsan 1000 mar ka xoog badan piracetam. Piracetam waxay hagaajinaysaa marxaladda hore ee habka xasuusta, halka budada Raw Noopept ay sidoo kale hagaajineysaa isku-dhafidda iyo dib u soo celinta xasuusta. Waa walaac ka hortag, antioxidant, anti-bararka, wuxuuna ka hortagaa neurotokijiyanka ka baxsan xadiga amyloid iyada oo sidoo kale hagaajinaysa socodka dhiigga. Wuxuu caawiyaa hurdada habeenkii, xanaaqa, lulmo, madax xanuun, iyo inuu yeesho tamarta lagama maarmaanka u ah maalinta. Waxay kaloo ka caawisaa walaaca, xasuusta, iyo walbahaarka.
Budada Root Noopept (157115-85-0) Smamnuucista
Product Name Root Noopept budada
Magaca Kiimikada N-phenylacetyl-L-prolylglycine ethyl ester, GVS-111
brand NAme Root Noopept budada
Molecular Wsideed 318.373 g / mol
barafku Psaliid 97 ° C-98 ° C
Biological Life-Life 30-60 daqiiqado
SOlubility Budada Raw Noopept waa aasaas ahaan nootropic biyo-ku milma, laakiin si fudud uguma milmi doonto biyaha ama casiirka.
Storage Temperature Ku kaydi meel madow oo qalalan oo heerkulkoodu ka sareeyo 25 ° C. Ka fogow meel carruur ah.
Application Ku daawee xusuusta aan fiicnayn, dareenka iyo hawlaha kale ee garashada iyo sidoo kale dareenka dareenka ah ee naafada ah.
Raw Noopept budada (157115-85-0)
Noopept (GVS-111) waa magaca sumadda ee loo yaqaan 'N-phenylacetyl-L-prolylglycine ethyl ester,' molecule synthetic nootropic molecule '.
Badanaa way isku wareertay sida qeyb ka mid ah qoyska cunsuriga, noopept waa peptide gaar ah oo laga sameeyay Ruush si loo daaweeyo hoos u dhaca garaadka ee da'da. Maanta, waxaa loo adeegsadaa waayeelka da 'yarta ah iyo kuwa dhalinyarta ah ee dhalinyarada ah, isla markaana waxay noqdeen mid ka mid ah daawooyinka ugu karti badan ee caanka ah ee hadda isticmaala.
Budada Noopept ayaa ka awood badan budhcad-badeedda iyo xasuusta kale ee kor u qaadaya daawooyinka caanka ah, noopept ayaa hadda loo isticmaalaa daroogada daawada u leh daaweynta cudurka Alzheimers, jahawareerka, iyo garashada kale ee da 'yarta ee dalalka sida Ruushka iyo Midowga Yurub.
Noopept ayaa si weyn u koray labaatankii sano ee la soo dhaafay oo hadda waa mid ka mid ah sootropics aad loogu taliyay bulshada dhexdeeda.
Budada Noopept (157115-85-0) Mashruuca Waxqabadka
Noopept wuxuu leeyahay hanaan ficil oo adag. Saamaynta nootropic ee daroogada waxaa dhexdhexaadinaya mid ka mid ah dheef-shiid kiimikaadka firfircoon (cycloprolylglycine) waxay la mid tahay qaab-dhismeedka loo yaqaan 'diopatide cyclic endogenous cyclic diide with anti amnesic' Waxaa la xaqiijiyay in daroogadu ay kordhiso muujinta NGF iyo BDNF ee hippocampus, waxay muujisaa sifooyin wanaagsan oo wanaagsan oo leh dabeecadaha iyo heerarka neerfaha, waxay yareyneysaa diiqadda oksida waxayna sare u qaadeysaa howlaha nidaamka antioxidant, waxayna xakameysaa kinsaatka pSAPK / JNK iyo pERK1. Noopept wuxuu hagaajiyaa xusuusta adoo kordhinaya kiimikooyinka maskaxda ee loo yaqaan BDNF iyo qaabab kale.
Faa'iidooyinka ee budada Noopept (157115-85-0)
Noopept wuxuu hagaajiyaa waxqabadka garashada iyo xajinta
Noopept Saarida Maskaxda
Noopept wuxuu kaa caawinayaa cadaadiska
Noopept wuxuu kaa caawin karaa Alzheimers
Talooyin Noopept budada ah (157115-85-0) Qiyaasta
Noopept wuxuu leeyahay qiyaasta caadiga ah ee ka hooseeya burcad-badeedda (4800mg), qiyaasta daawada loogu talagalay noopept waa 10-30mg.
Sida laga soo xigtay hal daraasad, budada noopept waa waqtiyo 1000 ka awood badan budhcad-badeeda, taas oo ah sababta qiyaasta lagu taliyey ay sidaas tahay.
Dhibaatooyinka ay keento ee budada Noopept (157115-85-0)
Dhibaatooyinka soo raaca ee budada Noopept waa mid khafiif ah dadka isticmaala badidoodna ma dareemaan wax saameyn ah haba yaraatee. Dhibaatooyin yar oo yar ayaa jira, laakiin haddii aad qaadato nootropic-ka xaddi badan waxay kuu keeni kartaa madax-xanuun, daal, lallabbo iyo hurdo la'aan.
Tilmaanta Noopept: Maxaa Noopept kuu samayn kartaa adiga?